နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ - မှတ်စုစာအုပ်
နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ
နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီ(န.အ.ဖ) (State Peace and Development Council) ကို နိူင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ (န.ဝ.တ)State Law and Order Restoration Council (SLORC) အမည်မှ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် အမည်ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
နဝတသည် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ(မဆလ)(BSPP)၏အခန်းကဏ္ဍကိုအစားထိုးပြောင်းလဲထားပြီး၊ အပေါ်ယံကသာအဓိကပြောင်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၁၉၉၇ တွင် နဝတကို ဖျက်သိမ်းပြီး၊ နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ (နအဖ) (SPDC)အဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည့်၁၉၆၂ ခုနှစ်မှစ၍ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်း ဦးဆောင်သောတပ်မတော်ကဖ.ဆ.ပ.လ အစိုးရထံမှအာဏာသိမ်းယူပြီး မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ (မ.ဆ.လ) ကိုထူထောင်ကာ တစ်ပါတီစနစ်ဖြင့် အုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီး ၁၉၈၈ခုနှစ်တွင်ရှစ်လေးလုံးအရေးအခင်းဖြင့် စစ်အစိုးရအသစ် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စောမောင်ဦးဆောင်သောတပ်မတော်က မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီထံမှ အာဏာသိမ်းယူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုအသစ် စစ်အစိုးရကောင်စီကို SLORC ဟုခေါ်ပြီး ပြည်သူ့ထံ အာဏာပြန်လွှဲရန်အတွက် လိုအပ်သော အခြေခံဥပဒေကို ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်အထိရေးဆွဲခဲ့သည်။
နအဖ တွင် ဌာနကြီးများနှင့် ဒေသဆိုင်ရာစစ်တိုင်းကြီးများ၏ တပ်မှူးကြီးများ ပါဝင်ကြသည်။ စစ်အာဏာပိုင်အဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင် ၁၁ ဦးသည် အစိုးရဝန်ကြီးများအဖွဲ့ထက် အာဏာကိုပို၍ သုံးနိုင်ခွင့် ရှိသည်။ လက်ရှိ ဥက္ကဌမှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ ဖြစ်သည်။ ဒုတိယ ဥက္ကဌမှာ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေး ဖြစ်သည်။ စစ်အာဏာပိုင်အဖွဲ့၏ အချို့သောအဖွဲ့ဝင်များသည် ဝန်ကြီးများအဖွဲ့၏ ဝန်ကြီးရာထူးများကိုလည်း ယူထားသည်။ အများ၏ ထင်မြင်ယူဆချက်တွင် စစ်တိုင်းမှုးများသည် ၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာတိုင်း ဒေသများတွင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်များများစားစားရရှိခြင်းကို ပျော်ရွှင်နှစ်သက်ကြသည်။ အစိုးရသည် တစ်ပါတီစနစ်ဖြင့် အုပ်ချုပ်သော မ.ဆ.လ ၏ မြန်မာ့နည်းမြန်မာ့ဟန် ဆိုရှယ်လစ်စံနစ်မှ နောက်ဆုတ်ထားသော်လည်း၊ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှု စွပ်စွဲချက်များ အများအပြားရှိနေသည်။ အစိုးရသည် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်ကို ပစ်ပယ်ထားပြီး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားသည်။
၂၀၀၇ စက်တင်ဘာလတွင် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးဟု အမည်တွင်သော သံဃာတော်များဦးဆောင်သော အရေးအခင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင် ၂၀၀၈ မေလ အခြေခံဥပဒေကို ပြည်သူများအား မဲဆန္ဒပေးစေပြီး အတည်ပြုခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် မြန်မာ့ရာဇ၀င်တွင် တခါမျှမပေါ်ဖူးသော နာဂစ်မုန်တိုင်းကြီး ၂၀၀၈ မေလတွင် တိုက်ခတ်ခံရ၍ လူနှစ်သိန်းနီးပါး သေဆုံးခဲ့ရပြီး နှစ်သန်းခန့် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ရကာ မြန်မာအစိုးရ၏ တရားဝင်ကြေညာချက်အရ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ဘီလျံ ၂၀ ခန့် နှင့်ညီသော ဆုံးရှုံးမှုရှိသည်ဟု သိရသည်။
ထိုမုန်တိုင်းနောက်ပိုင်းတွင် န.အ.ဖ သည် ၂၀၁၀ တွင်ကျင်းပပေးမည့် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် လိုအပ်သည်များကို ပြင်ဆင်လျက်ရှိသည်။
နဝတ ကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင် (နောက်ပိုင်းတွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး အထိ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရာထူးတင်ခဲ့ပြီး၊ ၁၉၉၇ ဂျူလင်လတွင်ကွယ်လွန် ) ဦးစီးသည့် မြန်မာ့လက်နက်ကိုင်တပ်များ “ရှစ်လေးလုံးထကြွမှု ”ကိုနှိမ်နင်းပြီး အာဏာသိမ်းယူခဲ့သည့် ၁၉၈၈ စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ အာဏာသိမ်းယူခဲ့ သည့်နေ့တွင် နဝတသည် အမိန့်အမှတ် ၁/၁၉၈၈ ဖြင့် တပ်မတော်မှအာဏာလွှဲပြောင်းရယူခြင်း နှင့် နဝတအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းကြောင်း အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အမိန့်အမှတ် ၂ / ၁၉၈၈ ဖြင့် နဝတသည် ၁၉၇၄ မြန်မာနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေအောက်တွင် တည်ရှိကြသော “နိုင်ငံတော်အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများ” အားလုံးကို ဖျက်သိမ်းပစ်သည်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၉၇၄ အခြေခံဥပဒေအောက်ရှိ ဥပဒေပြုအဖွဲ့)၊ ဝန်ကြီးများကောင်စီ (ဝန်ကြီးများအဖွဲ့)၊ ပြည်သူ့တရားသူကြီးများကောင်စီ (တရားစီရင်ရေးအဖွဲ့)၊ ပြည်သူ့ ဥပဒေအကျိုးဆောင်များကောင်စီ (ရှေ့နေချုပ်ရုံး)၊ ပြည်သူ့စာရင်းစစ်များကောင်စီ (စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး)၊ ထိုနည်းတူစွာ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း၊ မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်နှင့်ကျေးရွာ ပြည်သူ့ကောင်စီများ ကို ဖျက်သိမ်းပစ်သည်။
နဝတသည် ယခင်မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ (မဆလပါတီ)တွင် ဒုဝန်ကြီးများ၏အလုပ်တာဝန်များအစားထိုးခြင်း ကိုလည်းရပ်ဆိုင်းသည့်အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ (၁၉၇၄မြန်မာ့အခြေခံဥပဒေတွင် “ဝန်ကြီးများကောင်စီ” သည် ဝန်ကြီးများအဖွဲ့အဖြစ်ဆောင်ရွက်သော်လည်း ဒုဝန်ကြီးများကို ဝန်ကြီးများ ကောင်စီ၏ တရားဝင်အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် မထားရှိခဲ့သည့်အတွက် နဝတသည် တိကျသေချာစေရန် ယခင်မဆလအစိုးရအတွင်းရှိ ဒုဝန်ကြီးများကို ဝန်ကြီးများနှင့်အတူထားရှိပြီး ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။) အာဏာ သိမ်းသည့်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် နဝတ၏အမိန့်များကို ၁၉၈၈ စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်ထုတ် လုပ်သား ပြည်သူ့နေ့စဉ် သတင်းစာ တွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ နဝတ၏ပထမဦးဆုံးဥက္ကဌသည် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင် ဖြစ်ပြီး၊ နောက်ပိုင်းတွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ဖြစ်လာပြီး ဝန်ကြီးချုပ်လည်းဖြစ်သည်။ သူသည် ၁၉၉၂ ဧပြီလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ရာထူးမှဖယ်ရှားခံရပြီး၊ ထိုစဉ်ကဗိုလ်ချုပ်ကြီး နောက်ပိုင်းတွင်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ဖြစ်လာသည့် သန်းရွှေ မှ နဝတဥက္ကဌ နှင့် ဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးများကို လွှဲပြောင်းရယူသွားသည်။၁၉၉၇ နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် နဝတ ကို ဖျက်သိမ်းပြီး နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီ အဖြစ် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ အများအားဖြင့် သို့မဟုတ် အားလုံးမဟုတ်သော စစ်အစိုးရ၏နအဖ အဖွဲ့ဝင် အများစုသည် ဖျက်သိမ်းလိုက်သည့်နဝတအဖွဲ့ထဲမှ အဖွဲ့ဝင်များပင်ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးကောင်စီ၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ (၁၉၈၈ -၁၉၉၇)
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စောမောင် ( ၁၈ စက်တင်ဘာ ၁၉၈၈ – ၂၃ ဧပြီ ၁၉၉၂ )
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ ( ၂၃ ဧပြီ ၁၉၉၂ – ၁၅ နိုဝင်ဘာ ၁၉၉၇ )
နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ၊ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ (၁၉၉၇ မှစတင်သည်)
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ ( ၁၅ နိုဝင်ဘာ ၁၉၇၇ - ယခု အချိန်ထိ )
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ ၊ နအဖဥက္ကဌ ၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေး ၊ နအဖဒုတိယဥက္ကဌ ၊ ဒုတိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ကြည်းတပ်
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရ ရွှေမန်း ၊ ကြည်း ၊ ရေ ၊ လေပူးတွဲစစ်ဦးစီးချုပ်
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန် ၊ ဝန်ကြီးချုပ်
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သီဟသူရတင်အောင်မြင့်ဦး ၊ နအဖ၏အတွင်းရေးမှူး ၁ ၊ စစ်ထောက်ချုပ်
ဗိုလ်ချုပ် အုန်းမြင့် ၊ အဖွဲ့မှူး အထူးစစ်ဆင်ရေးအဖွဲ့ ၁ (ကချင်ပြည်နယ်၊ မန္တလေးတိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း)
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းအောင်လှိုင် ၊ အဖွဲ့မှူး အထူးစစ်ဆင်ရေးအဖွဲ့ ၂ ( ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကယားပြည်နယ် )
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကိုကို ၊ အဖွဲ့မှူး အထူးစစ်ဆင်ရေးအဖွဲ့ ၃ ( ပဲခူးတိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း)
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သာအေး ၊ အဖွဲ့မှူး အထူးစစ်ဆင်ရေးအဖွဲ့ ၄ (ကရင်ပြည်နယ် ၊ မွန်ပြည်နယ် ၊ တနင်္သာရီတိုင်း )
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်ဆွေ ၊ အဖွဲ့မှူး အထူးစစ်ဆင်ရေးအဖွဲ့ ၅ ( ရန်ကုန်တိုင်း )
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ဇော် ၊ အဖွဲ့မှူး အထူးစစ်ဆင်ရေးအဖွဲ့ ၆ (မကွေးတိုင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်)
ဗိုလ်ချုပ်လှဌေးဝင်း ၊ တပ်မတော် လေ့ကျင့်ရေးအရာရှိချုပ်
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အေး ၊ စစ်လက်နက်ပစ္စည်းအရာရှိချုပ်
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရမြင့်အောင် ၊ စစ်ရေးချုပ်
ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့များ၊ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ မြန်မာ့အရေးဆောင်ရွက်သူများ၊ နိုင်ငံတကာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့၊ လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ နှင့် အခြားသောအဖွဲ့များ၏ အစီရင်ခံစာများတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ချိုးဖောက်မှုများကို အသေးစိတ်ဖေါ်ပြထားသည်တို့မှာ -
လူသတ်မှု နှင့် မတရားသေဒဏ်စီရင်ခြင်းများ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဆိုးဝါးဆုံးသောဖြစ်ရပ်များထဲမှတစ်ခုသည် စစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုအဆုံးသတ်စေရန် အတွက် သန်းပေါင်းများစွာသောမြန်မာလူမျိုးများ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ချီတက်တောင်းဆိုခဲ့သည့် ၁၉၈၈ သြဂုတ်လ ထကြွမှုကာလ၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ စစ်သားများသည် ရာနှင့်ချီသော ကန့်ကွက်ဆန္ဒ ပြသူများကို ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး၊ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်း ခန့်မှန်းခြေ လူ ၃၀၀၀ သေဆုံးခဲ့သည်။၂၀၀၇ သြဂုတ် နှင့် စက်တင်ဘာ ဆန္ဒပြပွဲများအတွင်း အနည်းဆုံး ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြသူ ၁၈၄ ဦးသည် ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရပြီး၊ လူအများအပြား နှိပ်စက ညှဉ်းပန်း ခံခဲ့ရသည်။ စစ်တပ်သည် လူနည်းစုလူမျိုးနွယ်စုများအပေါ် ရက်စက်လူမဆန်သော စစ်ရေး ထိုးနှက်ချက်များ ဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေပြီး၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူသားများဥပဒေကို ချိုးဖောက်သည့်ယုတ်မာရက်စက်မှုများ ကျူးလွန်နေကြသည်။
နအဖသည် ကလေးများ- အချို့အသက် ၁၀ နှစ်အရွယ်-အား ၎င်း၏စစ်တပ် ၊ တပ်မတော်တွင် အမှုထမ်း ရန်အတွက် အတင်းအကြပ်လိုက်လံစုဆောင်းနေသည့်အကြောင်းကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အစီရင်ခံထားကြသည်။လတ်တလောမြန်မာစစ်တပ်ထဲတွင်ကလေးစစ်သားမည်မျှရှိသည်ကိုခန့် မှန်းရန်ခက်ခဲသည်။သို့သော်လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့၊ကလေးစစ်သားများကမ္ဘာ့အစီရင်ခံစာ ၂၀၀၈ နှင့် နိုင်ငံတကာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့တို့၏အဆိုအရ ထောင်ဂဏန်း နီးပါး ရှိသည်။
ကလေးစစ်သားများစုဆောင်းနေခြင်းအတွက် အကြောင်းပြချက်များထဲမှတစ်ခုမှာ တစ်နိုင်ငံလုံးကို ပိတ်ဆို့ ထိမ်းချုပ်ထားနိုင်မည့် စစ်တပ်ဖြစ်ရန် စစ်သား ပို၍ များများလိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တစ်သီးတစ်ခြား နှင့် အခွင့်ထူးခံသည့် မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်များအပေါ် မြန်မာအများစု၏မနှစ်မြို့ဖွယ် ခံစားနေရမှုများကို ပြသည့်အနေဖြင့် စစ်တပ်ထဲမဝင်ကြသည့်အတွက်ကြောင့် စစ်တပ်သည် တစ်ခါတစ်ရံ တွင်ကလေးစစ်သား အတင်းအကြပ်စုဆောင်းခြင်းဘက်သို့ လွှဲပြောင်းလုပ်ဆောင်ရသည်။
ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်သည် ကလေးစစ်သားများစုဆောင်းခြင်း နှင့် အသုံးပြုခြင်းကို တားဆီးသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများကို ချိုးဖောက်သည့်အတွက် လေးကြိမ်ဆက်တိုက် အစီရင်ခံစာများတွင် နအဖ ကို နာမည်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
ကလေးများ နှင့် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခ ၊ အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏အစီရင်ခံစာ၊ ၂၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၆ UN Doc. A/61/529 S2006/826
မြန်မာနိုင်ငံ ကလေးသူငယ်များနှင့်လက်နက်ကိုင်များပဋိပက္ခအပေါ် လုံခြုံရေးကောင်စီသို့တင်ပြသည့် အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏အစီရင်ခံစာ၊ ၁၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၇ ၊ UN Doc. S/2007/666.
လုံခြုံရေးကောင်စီသို့တင်ပြသည့် ကလေးသူငယ်များနှင့်လက်နက်ကိုင်များပဋိပက္ခအပေါ် အတွင်းရေးမှူး ချုပ်၏အစီရင်ခံစာ၊ ၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၇ ၊ UN Doc. A/62/609-S/2007/757.
မြန်မာနိုင်ငံကလေးသူငယ်များနှင့်လက်နက်ကိုင်များပဋိပက္ခအပေါ် အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏အစီရင်ခံစာ ၁ ဇွန် ၂၀၀၉ UN Doc. S/2009/278.
လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ အစီရင်ခံထားသည်မှာ၂၀၀၈ မေ နာဂစ်မုန်တိုင်းပြီးချိန်မှစ၍ မြန်မာအာဏာပိုင်များသည် ထောင်နှင့်ချီမဟုတ်သော် လည်း ရာနှင့်ချီသောနေရာမဲ့လူများကို ကျောင်းများ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းများ နှင့် အများပိုင်အဆောက်အအုံများမှ ဖယ်ရှားခဲ့ပြီး၊ ထိုသူတို့ကို ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ် ရှိ ပျက်စီးနေသည့်၎င်းတို့၏ရွာများသို့ပြန်ရန် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းသည် ဆန္ဒခံယူပွဲကို ရက်ရွှေ့ဆိုင်းပေးရန် နှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကယ်ဆယ်ရေး အပေါ် ၎င်းတို့၏အရင်းအမြစ်များ ချိန်ဆရန် တို့အတွက် မေတ္တာရပ်ခံတောင်းဆိုခဲ့သော်လည်း၊ အာဏာပိုင်များသည် အခြေခံဥပဒေအသစ် ဆန္ဒခံယူပွဲ မဲရုံလုပ်ရန်အတွက် အချို့သော အများပိုင်အဆောက် အအုံများ နှင့် ကျောင်းများကို ရှင်းလင်းထားခဲ့သည်။ ထိုစဉ်အခါ၌နအဖသည်ယခင်မြို့တော်ရန်ကုန်အနီးတစ်ဝိုက်ရှိ ဒါဇင်ပေါင်းများစွာရှိသော အစိုးရလုပ်ကိုင်နေသည့် ကယ်ဆယ်ရေးရွက်ဖျင်တဲများမှ ဒုက္ခသည်များအား နှင်ထုတ်ခဲ့ကြပြီး၊ ၎င်းတို့ကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲတို့ကို အလေးမမူတော့ပဲ မိမိတို့အိမ်သို့ ပြန်ကြရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။
အတင်းအကြပ်နှင်ထုတ်ခြင်းသည် အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးကာလ ပြီးဆုံးသွားသည်နှင့်နိုင်ငံခြားအကူအညီမလိုပဲလေဘေးသင့်လူအများသည်၎င်းတို့၏ဘဝများကို၎င်းတို့ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ပြီ ဆိုသည်များကို ပြသရန် အစိုးရ၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတစ်ပိုင်း ဖြစ်သည်။ နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် အိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်ရသူများသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေအောက်တွင် နိုင်ငံအတွင်းရွှေ့ပြောင်းရသူများဟု နားလည်သိရှိထားသည်။ နိုင်ငံအတွင်းရွှေ့ပြောင်းရခြင်းအပေါ် ကုလသမဂ္ဂလမ်းညွှန်စည်းမျဉ်းများ အောက်တွင် မြန်မာအစိုးရသည် နိုင်ငံအတွင်းရွှေ့ပြောင်းရသူများ မိမိတို့၏အိမ်သို့ ပြန်ရန် သို့မဟုတ် နေထိုင်နေကျနေရာများသို့ပြန်ရန် သို့မဟုတ် နိုင်ငံ၏အခြားသောနေရာတွင် ဆန္ဒအလျှောက် အခြေချနေထိုင်ရန် တို့အတွက် စိတ်ချလက်ချနှင့်သိက္ခာရှိရှိ ဆန္ဒအလျှောက်ဖြစ်စေရမည့် အခွင့်အရေးကို သေချာမှုဖြစ်စေရမည်။
အဆိုးရွားဆုံးအတင်းအကြပ်ခိုင်းစေမှုအချို့ကို မြန်မာအရှေ့တောင်အရပ်မှ အစီရင်ခံခဲ့သည်။ ထိုနေရာတွင် ဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်ချီသော ဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းကို အမေရိကန် ယူနိုကယ် (UNOCAL) နှင့် ပြင်သစ် တိုတယ် (TOTAL) ရေနံကုမ္ပဏီများ ပူးပေါင်းအဖွဲ့နှင့် မြန်မာအစိုးရတို့ တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။ အတင်းအကြပ်ခိုင်းစေမှုကို ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများတွင်လည်း သုံးစွဲခဲ့သည်။ ၁၉၉၇ မတ်လ တွင် ဥရောပသမဂ္ဂသည် အတင်းအကြပ်အလုပ်ခိုင်းစေမှု နှင့် အခြားသောချိုးဖောက်မှုများ ကြီးထွားလာသည့်အတွက်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအား ပေးထားသည့် ကုန်သွယ်ရေးအထူးအခွင့်အရေးကို ရုတ်သိမ်းသွားခဲ့သည်။
၂၀၀၇ သြဂုတ်လတွင် အကြီးအကျယ်ဆန္ဒပြမှုများ မစတင်ခဲ့မှီအချိန်၌ အာဏာပိုင်များသည် နိုင်ငံရေးအပေါ်အခြေပြု၍ အစိုးရနှင့်ဆန့်ကျင်သူ နာမည်ကြီးများကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး၊ ထိုသူတို့အနက်မှ များစွာသောသူများ ကို လများစော၍ အကျဉ်းထောင်မှ လွှတ်ပေးခဲ့သည်။ ၂၅-၂၉ စက်တင်ဘာ ဖြိုခွဲနှိမ်နင်းမှုမတိုင်မှီ ဆန္ဒပြပွဲများစီစဉ်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်တည်း အတိုက်အခံပါတီ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ၏အဖွဲ့ဝင်များကို ပိုမိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး၊ယင်းကိစ္စကို ဖြိုခွင်းနှိမ်နင်းမှုမတိုင်မှီ ကြိုတင်ရှင်းလင်းခြင်းလုပ်ရပ်အဖြစ် လူအများက ရှုမြင်ခဲ့ကြသည်။ ဖြိုခွဲနှိမ်နင်းမှုကာလအတွင်းမှာပင် လူစုလူဝေးစုရုံးမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အာဏာပိုင်များသည် ၂၀၀၇ တစ်လျှောက်လုံး ဆန္ဒပြသူများနှင့်ထောက်ခံသူများကို ဆက်တိုက်လိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ၃၀၀၀ နှင့် ၄၀၀၀အကြား ကလေးသူငယ်များနှင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များအပါအဝင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပြီး၊ ထိုသူတို့အနက်မှ ရ၀၀ သည် နှစ်ကုန်အထိ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခံထားရသည်ဟု ယုံကြည်ရ သည်။ အနည်းဆုံးလူ ၂၀ သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမျှတမှုခုံရုံးစံချိန်စံညွှန်းများနှင့် မကိုက်ညီသည့် အကြမ်းဖက်မှုနှိမ်နင်းရေးဥပဒေဖြင့် တရားစွဲဆိုပြီး စီရင်ချက်ချခဲ့သည်။ ထိန်းသိမ်းခံရသူများနှင့် ကာကွယ်ပေးသူများသည် တရားဥပဒေဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများကို ငြင်းပယ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။
ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး
ဒု ဥက္ကဌ ဒု-ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမောင်အေး ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း)
အဖွဲ့ဝင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရရွှေမန်း (ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး (ကြည်း/ရေ/လေ)
အဖွဲ့ဝင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန် (၀န်ကြီးချုပ်)
အတွင်းရေးမှူး(၁) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသီဟသူရတင်အောင်မြင့်ဦး- (စစ်ထောက်ချုပ်)
အဖွဲ့ဝင် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အေး၊ (ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးအရာရှိချုပ်)
အဖွဲ့ဝင် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြင့်ဆွေ ၊ (အမှတ် (၅) စစ်ဆင်ရေးအထူးအဖွဲ့မှူး)
အဖွဲ့ဝင် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြတ်ဟိန်း၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ)
အဖွဲ့ဝင် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြင့်လှိုင်၊ လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးအရာရှိချုပ်
အဖွဲ့ဝင် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့်၊ တပ်မတော်စစ်ဖက်ရေးရာလုံခြုံရေးအရာရှိချုပ်
အဖွဲ့ဝင် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးသာအေး၊ (အမှတ် (၄) စစ်ဆင်ရေးအထူးအဖွဲ့မှူး)
အဖွဲ့ဝင် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ဇော်၊ (အမှတ် (၆) စစ်ဆင်ရေးအထူးအဖွဲ့မှူး)
အဖွဲ့ဝင် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရမြင့်အောင်၊ စစ်ရေးချုပ်
အဖွဲ့ဝင် ဗိုလ်ချုပ်အုန်းမြင့်၊ (အမှတ် (၁) စစ်ဆင်ရေးအထူးအဖွဲ့မှူး)
အဖွဲ့ဝင် ဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်၊ (အမှတ် (၂) စစ်ဆင်ရေးအထူးအဖွဲ့မှူး)
အဖွဲ့ဝင် ဗိုလ်ချုပ်ကိုကို (အမှတ် (၃) စစ်ဆင်ရေးအထူးအဖွဲ့မှူး)
အဖွဲ့ဝင် ဗိုလ်ချုပ်မောင်ရှိန် တပ်မတော်စစ်ဆေးရေးအရာရှိချုပ် (ကြည်း/ရေ/လေ)
အဖွဲ့ဝင် ဗိုလ်ချုပ်လှဌေးဝင်း၊ တပ်မတော်လေ့ကျင့်ရေးအရာရှိချုပ် (ကြည်း/ရေ/လေ)
အဖွဲ့ဝင် ဗိုလ်ချုပ်ဥာဏ်ထွန်း၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ)
ဝန်ကြီးချုပ် သိန်းစိန်, ဗိုလ်ချုပ်ကြီး
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ၀န်ကြီးဌာန ဌေးဦး, ဗိုလ်ချုပ်
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန တင်နိုင်သိန်း,ဗိုလ်မှူးချုပ်
ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နှင့် ကြေးနန်းဝန်ကြီးဌာန သိန်းဇော်, ဗိုလ်မှူးချုပ်
ဆောက်လုပ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန စောထွန်း, ဗိုလ်ချုပ်
သမ၀ါယမ ၀န်ကြီးဌာန တင်ထွဋ်, ဗိုလ်ချုပ်
ယဉ်ကျေးမှု ၀န်ကြီးဌာန ခင်အောင်မြင့်, ဗိုလ်ချုပ်
ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန သန်းရွှေ, ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး
ပညာရေး ၀န်ကြီးဌာန ချမ်းငြိမ်း, ဒေါက်တာ
အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာန ဇော်မင်း, ဗိုလ်မှူးကြီး
အမှတ်(၂)လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာန ခင်မောင်မြင့်, ဗိုလ်ချုပ်
စွမ်းအင် ၀န်ကြီးဌာန လွန်းသီ, ဗိုလ်မှူးချုပ်
ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန် ၀န်ကြီးဌာန လှထွန်း, ဗိုလ်ချုပ်
နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန ဥာဏ်ဝင်း, ဗိုလ်ချုပ်
သစ်တောရေးရာ ၀န်ကြီးဌာန သိန်းအောင်, ဗိုလ်မှူးချုပ်
ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဌာန ကျော်မြင့်, ဒေါက်တာ
ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာန မောင်ဦး, ဗိုလ်ချုပ်
ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ၀န်ကြီးဌာန စိုးနိုင်, ဗိုလ်ချုပ်
လူဝန်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ၀န်ကြီးဌာန စောလွင်, ဗိုလ်ချုပ်
အမှတ်(၁)စက်မှု ၀န်ကြီးဌာန အောင်သောင်း၊ ဦး
အမှတ်(၂)စက်မှု ၀န်ကြီးဌာန စိုးသိန်း, ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး
ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာန ကျော်ဆန်း, ဗိုလ်မှူးချုပ်
အလုပ်သမား ၀န်ကြီးဌာန အောင်ကြည်၊ ဦး
မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်း ၀န်ကြီးဌာန မောင်မောင်သိန်း, ဗိုလ်မှူးချုပ်
သတ္တုတွင်း ၀န်ကြီးဌာန အုန်းမြင့်, ဗိုလ်မှူးချုပ်
အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ၀န်ကြီးဌာန စိုးသာ ၊ ဦး
နယ်စပ်ဒေသ တိုင်းရင်းသားများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်စည်ပင်သာယာရေး ၀န်ကြီးဌာန သိန်းညွှန့်, ဗိုလ်မှူးကြီး
ရထားပို့ဆောင်ရေး ၀န်ကြီးဌာန အောင်မင်း, ဗိုလ်ချုပ်
သာသနာရေး ၀န်ကြီးဌာန သူရမြင့်မောင်, ဗိုလ်မှူးချုပ်
သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ ၀န်ကြီးဌာန သောင်း ၊ ဦး
လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ၀န်ကြီးဌာန မောင်မောင်ဆွေ, ဗိုလ်ချုပ်
အားကစား ၀န်ကြီးဌာန သူရအေးမြင့်, ဗိုလ်မှူးချုပ်
ပို့ဆောင်ရေး ၀န်ကြီးဌာန သိန်းဆွေ, ဗိုလ်ချုပ်
အစိုးရ၀န်ကြီးဌာနများ နှင့် အခြားအစိုးရဌာနများ
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန
နယ်စပ်ဒေသ တိုင်းရင်းသားများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်စည်ပင်သာယာရေး ၀န်ကြီးဌာန
ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန် ၀န်ကြီးဌာန
မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်း ၀န်ကြီးဌာန
လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ၀န်ကြီးဌာန
လူဝန်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ၀န်ကြီးဌာန
သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ ၀န်ကြီးဌာန
ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ၀န်ကြီးဌာန
အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ၀န်ကြီးဌာန
နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီ၏ ရှေ့ ဆက်သွားမည့်မူဝါဒလမ်းစဉ် (၇) ရပ်
၃။ အမျိုးသားညီလာခံကြီးက ချမှတ်ပေးသော အခြေခံမူများနှင့် အသေးစိတ်အခြေခံရမည့်မှုများနှင့်အညီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းကိုရေးဆွဲခြင်း။
၄။ ဖြစ်ပေါ်လာသည့်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေမူကြမ်းကိုပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲများကျင်းပ၍အတည်ပြုခြင်း။
၆။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေအသစ်နှင့်အညီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးပွဲများကျင်းပခြင်း။
နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီ၏ ဆောင်ပုဒ်များ
• ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေး .......................................... ဒို့အရေး
• တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုမပြိုကွဲရေး ................... ဒို့အရေး
• အချုပ်အခြာအဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး .......................... ဒို့အရေး
နိုင်ငံရေး ဦးတည်ချက် (၄) ရပ်
• နိုင်ငံတော် တည်ငြိမ်ရေး၊ ရပ်ရွာ အေးချမ်း သာယာရေး နှင့် တရား ဥပဒေ စိုးမိုးရေး
• အမျိုးသား ပြန်လည် စည်းလုံး ညီညွတ်ရေး
• ခိုင်မာသည့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေသစ် ဖြစ်ပေါ်လာရေး
• ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေသစ် နှင့် အညီ ခေတ်မီဖွံ့ ဖြိုးတိုး တက်သော နိုင်ငံတော် သစ်တစ်ရပ် တည်ဆောက်ရေး
စီးပွားရေး ဦးတည်ချက် (၄)ရပ်
• စိုက်ပျိုးရေးကို အခြေခံ၍ အခြားစီးပွားရေး ကဏ္ဍများကိုလည်း ဘက်စုံဖွံ့ ဖြိုး တိုးတက်အောင် တည်ဆောက်ရေး
• ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ် ပီပြင်စွာဖြစ်ပေါ်လာရေး
• ပြည်တွင်းပြည်ပ မှ အတတ်ပညာ နှင့် အရင်းအနှီးများ ဖိတ်ခေါ်၍ စီးပွားရေး ဖွံ့ ဖြိုး တိုးတက်အောင် တည်ဆောက်ရေး
• နိုင်ငံတော် စီးပွားရေးတစ်ရပ်လုံးကို ဖန်တီးနိုင်မှု စွမ်းအားသည် နိုင်ငံတော်နှင့် တိုင်းရင်းသား ပြည်သူတို့၏ လက်ဝယ်တွင်ရှိရေး
လူမှုရေး ဦးတည်ချက် (၄)ရပ်
• တစ်မျိုးသားလုံး၏ စိတ်ဓာတ်နှင့် အကျင့်စာရိတ္တမြင့်မားရေး
• အမျိုးဂုဏ်၊ ဇာတိဂုဏ် မြင့်မားရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ၊ အမျိုးသားရေး လက္ခဏာများ မပျောက်ပျက်အောင် ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေး
• မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ် ရှင်သန်ထက်မြက်ရေး
• တစ်မျိုးသားလုံး ကျန်းမာ ကြံ့ခိုင်ရေး နှင့် ပညာရည် မြင့်မားရေး
န.အ.ဖ အုပ်ချုပ်နေသောကာလ ၁၉၈၈ မှ ၂၀၀၈ အနှစ်၂၀အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသား ၄၇၀၅၇ ဦးသာ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ (တရားဝင်) ထွက်ခွာ သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြပြီး သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံများမှ ထုတ်ပြန်သည့် စာရင်းဇယားအရ ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် (တရားမဝင်) အလုပ်လုပ်နေသော မြန်မာအလုပ်သမား နှစ်သန်းကျော် ရှိကြောင်း အစိုးရ သတင်းစာက ဖော်ပြထားသည်။